Umhlahlandlela Owesabekayo we-CMO ka-2014 Wendawo Yomphakathi Martech Zone
NgoLwesithathu, July 30, 2014 NgoLwesithathu, July 30, 2014 Douglas Karr
Izolo, bengigcwalise lokhu okuthunyelwe futhi besengizocofa ukushicilela lapho ngishayisa ubhiya kwi-laptop yami. Ngiyethemba ukuthi bekungeyona i-karma eza ukukhahlela isidunu sami. I-laptop yasinda, kepha ngandlela thile okuthunyelwe kwebhulogi kwanyamalala. Ngibhala lokhu okuthunyelwe ngephunga elincane likabhiya ngemuva ukungikhumbuza ukuthi ngiqhubeke nokuthamba kwami ​​phansi.
Nansi into, ngicabanga ukuthi le yi-infographic esabekayo. Ngokubuka, ayinakho ukutshelwa kwendaba ephelele noma yini. Kumane iqoqo lemibono eqoqwe kusuka ezindatshaneni nemibiko ethi - ngikholwa ukuthi - izokwenza kabi kakhulu endleleni yenhlangano yokusebenzisa isu elihle kakhulu lezokuxhumana ukuze lihlanganyele futhi lakhe ibhizinisi lalo online. Akuhlukanisiwe nge-B2B, B2C, ubukhulu bebhizinisi noma ingxenye yemboni. Ugh.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, ukungabi bikho kokukhulunywa ngakho kwe- isici somuntu senhlalo iyangethusa. Ukuqwashisa ngomkhiqizo akufani nokuxhumana komuntu. Ukubona uphawu kuwukwazisa ngomkhiqizo. Ukuqoqa igunya nokwethembela ku-intanethi, ukushayela izivakashi eziningi ukuguqula ukuxhumana kwabantu okudinga ukubandakanyeka ngokomzwelo. Angikholwa ukuthi ukuqwashisa ngomkhiqizo kuyisici esiyinhloko sokusebenzisa izinkundla zokuxhumana, ngikholwa ukuthi ukwakha idumela lakho. Abantu bathemba abantu… kanti abanye balabo bantu basebenzela imikhiqizo. Anginayo inkhulumomphendvulwano noma ngifunde imibono yezimpawu online, ngiyakhuluma, ngiyabelana futhi ngiyathenga kubantu.
Anginandaba nethrafikhi. Ithrafikhi ayinandaba ngaphandle kokuthi ithrafikhi ishayela imiphumela yebhizinisi. Ukuziphatha nokuguqulwa okubaluleke kakhulu kunethrafikhi. Ngingahamba ngiyothenga izikhangiso ezihambisa amakhulu ezinkulungwane zokubukwa kwiwebhusayithi, akunandaba ngaphandle kokuthi leyo thrafikhi ifanele, inentshisekelo, futhi iholela endleleni eya ekuguqukeni. I-LinkedIn "kulungile" kepha i-Facebook yinhle? Obani?
Isimo sezinkundla zokuxhumana siyi hhayi ngamapulatifomu, kumayelana nokuthi benzani kahle futhi abenzi kahle ukusiza amabhizinisi ukuxhumana namathemba abo namakhasimende. Esikhundleni samapulatifomu, lokhu kufanele kukhulume kunoma yikuphi okuqukethwe okwazi ukwabelana ngakho, ukuthi ukwazi kanjani ukukwabelana ngakho, nokuthi ikhasimende noma okulindelekile kungenzani ngakho. Bangakwazi yini ukuxhumana ngakho? Bangakwazi ukukhulisa umlayezo wakho kuzethameli ezifanele kakhulu? Bangathenga kuyo? Amapulatifomu azofika ahambe, kepha isimilo somphakathi siyisihluthulelo.
Ukuxhumana kwamakhasimende akubalulekile, ikhasimende intelligence kuyakwenza. Uyini umuzwa womkhiqizo wakho ku-inthanethi? Waziwa kanjani uma uqhathaniswa nomncintiswano wakho? Yini abantu abayidingayo embonini yakho? Ingabe uliphatha kahle idumela lakho? Ngabe uwahlinzeka kahle amakhasimende akho esimeni senhlalo lapho amakhono akho wamakhasimende abiwa esidlangalaleni? Wenzani ngevolumu engapheli yedatha nobuhlakani obukhona lapho mayelana namathemba akho namakhasimende?
Akukho ngxoxo nge- mobile (ngaphandle kohlelo lokusebenza lwe-Instagram), wendawo, Futhi ukukhangisa komphakathi? Izici ezintathu zokuxhumana ezakha intuthuko enkulu, i-buzz nemiphumela? Kuthiwani ngokuthi kungasetshenziswa kanjani ipulatifomu ngayinye kuwo wonke amadivayisi futhi kubhekiswe kuyo ngempumelelo enkulu? Angikholwa ukuthi akukho lwazi kulokhu uma ukhuluma nomkhakha wezokuxhumana.
Angifuni ngisho nokungena ekutheni i-SEO ikwenze kanjani etafuleni. Uma ufuna ukubheka i-infographic enhle engasiza imizamo yakho yokumaketha imidiya yokuxhumana nabantu, hlola Umhlahlandlela Wensimu Wokuzula Imidiya Yezenhlalo, Amabhizinisi Ayisebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana, Social Local Ucingo futhi Imithetho Yezokuxhumana Komphakathi ukuthola eminye imininingwane ewusizo.
Ngithanda ngokweqiniso CMO.com - Ngifunda ulwazi olumangazayo nezeluleko lapho nsuku zonke, kepha le infographic ilahlekelwa ngokuphelele uphawu lomthengisi olumaphakathi ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana ngempumelelo. Musa ukumane ushaye itafula ku-Photoshop bese ulibiza nge-infographic. Thola i- ukwakheka kwe-infographic efanelekile bese uxoxa indaba abathengisi abangayiqonda, bayishwabadele, bayikholelwe futhi babelane ngayo!
Ungabheka le infographic futhi ungavumelani nami. Ngingathanda ukwazi, nokho, ukuthi yisiphi iseluleko esisebenzayo ongasithola kule infographic nokuthi uzosisebenzisa kanjani ebhizinisini lakho.
Tags: Isimo sezenhlalo sango-2014i-infographic embiukuqaphela umkhiqizoKanjaniukuxhumana kwamakhasimendeFacebookGoogle +infographicukwakheka kwe-infographicinstagramLinkedInPinterestinfographic empofuseoi-slideshareukukhiqizwa kwezimotoTwitteryoutube